Ever Smile | Working Friends - Part 2
2018年12月7日 2018年12月7日 Ever SmileLeaveacomment
ကျောင်းသားဗီဇာမှ အလုပ်ဗီဇာသို့ – အကျိုးဆောင်ရှေ့နေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း Continue Reading
ဂျပန်ကုမ္ပဏီအလုပ်​လျှောက်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ – ၃
2018年11月26日 2018年11月26日 Ever SmileLeaveacomment
အလုပ်လျှောက်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ (၃) 【Zawgyi】⇒ ◈Ever Continue Reading
ဂျပန်ကုမ္ပဏီအလုပ်​လျှောက်သည့် အတွေ့အကြုံ – ၂
2018年11月21日 2018年11月21日 Ever Smile1 Comment
အလုပ်လျှောက်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ (၂) 【Zawgyi】⇒ ◈Ever Continue Reading
2018年11月19日 2018年11月19日 Ever SmileLeaveacomment
အလုပ်လျှောက်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ (၁) ■Ever Smile Continue Reading
ဂျပန်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်း အများဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံ!
2018年10月25日 2018年10月25日 Ever SmileLeaveacomment
ဂျပန်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်း အများဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံ! 【Zawgyi】⇒ ☆Ever Continue Reading
2018年10月17日 2018年10月17日 Ever SmileLeaveacomment
နိုင်ငံခြားသားများ အလုပ်ရရှိနှုန်းနည်းရခြင်းအကြောင်းအရင်း(2) 【Zawgyi】⇒ ■Ever Smile Continue Reading
2018年10月12日 2018年10月12日 Ever SmileLeaveacomment
【Zawgyi】⇒ လူကြိုက်များသော လုပ်ငန်းနှင့် အခွင့်အရေး (၂) Continue Reading
2018年10月5日 2018年10月9日 Ever SmileLeaveacomment
နိုင်ငံခြားသားများ အလုပ်ရရှိနှုန်းနည်းရခြင်းအကြောင်းအရင်း(1) 【Zawgyi】⇒ 2018ခုနှစ်6လပိုင်း7လပိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများ၏ Continue Reading
2018年10月2日 2018年10月2日 Ever SmileLeaveacomment
လူကြိုက်များသော လုပ်ငန်းများ in JP (၁) Continue Reading
2018年9月26日 2018年9月26日 Ever SmileLeaveacomment
ကျောင်းသားဗီဇာမှ အလုပ်ဗီဇာသို့(၂) 【Zawgyi】⇒ ■Ever Smile Continue Reading